amasistimu wokushisa wokungeniswa okuphakathi nendawo okwakha, ukwakha okushisayo, njll
Ikhaya / Ukunikezwa Kwamandla Okunciphisa / Amasistimu wokushisa we-MFS aphakathi nendawo
Categories: Ukunikezwa Kwamandla Okunciphisa, I-Series Frequency Series Tags: imvamisa ephakathi, ukumvama okuphakathi naphakathi, imvamisa medium UKWAKHA, i-hemat frequency ephakathi, ukushisa okuvamile, Idivayisi yokushisa yokuvama emaphakathi, umshini wokushisa ophakathi, Amandla okushisa okuphakathi okuvamile, Isistimu yokufudumala yamavamisa ephakathi, Imvamisa emaphakathi yakha ukushisa, imvamisa ephakathi iyancibilika, ukushisa imvamisa emaphakathi
amasistimu wokushisa wokungeniswa okuvama okulingene namandla kagesi wokushisa
Amasistimu wokushisa wokungeniswa okuvame kakhulu (MFS chungechunge) acetized ngefrikhwensi uhla 500Hz, 10KHz kanye ne-power100 ～ 1500KW, zisetshenziselwa ukufudumeza okungena ngaphakathi, njengokushisa kwenduku ekubumbeni, ukuncibilika, ukufaka kahle nokushisa kokushisela. Ngenxa yobubanzi bayo obubanzi, umphumela wokushisa onelisekile utholakala kalula ngomklamo wokucabangela zonke izinto ezinjengezifiso ezingena ngaphakathi, ukusebenza kahle kokushisa, umsindo osebenzayo, amandla ashukumisayo kazibuthe njalonjalo.
Emishinini yemvamisa emaphakathi ye-MFS, kusetshenziswa isakhiwo esifanayo sokuheha. Izakhi zamandla emodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe besizukulwane sesine bokuguqula ubuchwepheshe bokulawula busetshenziswa ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokwethembeka. Ukuvikelwa ngokuphelele kwamukelwa njengokuvikelwa kwamanje, ukuvikelwa kokuhluleka kwamanzi, ukuvikelwa kokushisa, ukuvikelwa kwamandla kagesi, ukuvikelwa kwesifunda okufushane kanye nokuvikelwa kwesigaba. Lapho usebenza, okukhipha manje, amandla okukhipha, imvamisa ekhanyayo namandla okukhipha konke kukhonjiswa kuphaneli yokusebenza ukusiza ekwakhiweni kwekhoyili nokulungisa umshini.
Ngokuya ngokusetshenziswa okwehlukile, kusetshenziswa izakhiwo ezimbili eziyinhloko:
(1) isakhiwo 1: MF generator + capacitor + coil
Lesi sakhiwo samukelwa kaningi ekusetshenzisweni okuningi, njengenduku umshini wokufudumeza lokungeniswa nomshini wokuncibilika. Lesi sakhiwo silula, silahlekile futhi sisebenza kahle ekushiseni.
Kulesi sakhiwo, imvamisa 3 kuya ku-15 methubhu yethusi iyadingeka ukwenza ikhoyili; amandla wekhoyili aphakeme afike ku-550V, futhi angahlukaniswanga nohlelo lokuphakelwa kwamandla, ngakho-ke ikhoyili kufanele ifakwe ngendlela efanelekile ukuqinisekisa ukuphepha kwabahlinzeki.
） 2） isakhiwo 2: MF generator + cap + transformer + coil
Lesi sakhiwo sisetshenziswa kaningi, njengokuncibilika ku-vacuum, imvamisa emaphakathi umshini wokuqina wokufakelwa njalo njalo. Ngokuklanywa kwesilinganiso se-transformer, okukhipha njengamanje namandla kagesi kungalawulwa ukwanelisa isifiso sokushisa esihlukile.
Kulesi sakhiwo, ikhoyili iphephile kuma-opharetha, i-coil tube ingavezwa ngqo ngokufakwa ngaphandle. Ikhoyili kulula ukuyenza ngokujika okumbalwa kuphela. Vele, i-transformer izokhuphula izindleko nokusetshenziswa komshini.
models Kukalwe amandla wokukhipha Ukufutheka kaningi wamanje wokufaka voltage Input Umjikelezo womsebenzi Ukugeleza kwamanzi isisindo Dimension
MFS-100 100KW I-0.5-10KHz 160A 3phase 380V 50Hz 100% I-10-20m³ / h 175KG 800x650x1800mm
MFS-160 160KW I-0.5-10KHz 250A I-10-20m³ / h 180KG 800x 650 x 1800mm
MFS-200 200KW I-0.5-10KHz 310A I-10-20m³ / h 180KG 800x 650 x 1800mm
MFS-250 250KW I-0.5-10KHz 380A I-10-20m³ / h 192KG 800x 650 x 1800mm
MFS-300 300KW I-0.5-8KHz 460A I-25-35m³ / h 198KG 800x 650 x 1800mm
MFS-400 400KW I-0.5-8KHz 610A I-25-35m³ / h 225KG 800x 650 x 1800mm
MFS-500 500KW I-0.5-8KHz 760A I-25-35m³ / h 350KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-600 600KW I-0.5-8KHz 920A I-25-35m³ / h 360KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-750 750KW I-0.5-6KHz 1150A I-50-60m³ / h 380KG 1500 x 800 x 2000mm
MFS-800 800KW I-0.5-6KHz 1300A I-50-60m³ / h 390KG 1500 x 800 x 2000mm
Idizayini yempendulo ye-Voltage futhi yamukela isekethe ye-IGBT esekwe ku-LC yesekethe.
Ubuchwepheshe bokuguqula i-IGBT, ukuguqulwa kwamandla okuphezulu ngaphezulu kwe-97.5%.
Ukonga u-30% phezulu kuqhathaniswa nobuchwepheshe be-SCR. Esifundeni se-resonance wesekethe, ikhoyili yokungeniswa ene-voltage ephezulu ne-low low, ngakho-ke ukulahleka kwamandla kuncane kakhulu. Ubuchwepheshe bokushintsha obuthambile obusetshenzisiwe bese ukulahleka kokushintsha kuphansi kakhulu.
Ingaqalwa ngo-100% ngaphansi kwanoma yisiphi isimo.
100% umjikelezo womsebenzi, i-24hours ikhono lokusebenza eliqhubekayo ngamandla amakhulu.
Isici samandla se-harmonic samanje nesiphezulu samandla amancane. Isici samandla sihlala siyi-0.95 ngenhla ngenkathi kusebenza umshini.
Ubuchwepheshe bokulandelela imvamisa bunika amandla isici samandla sokuhlala ezingeni eliphakeme kuyo yonke inqubo yokushisa.
Ukwethembeka okuhle, i-IGBT iyi-trans-transistor yokuzicisha eqinisekisa ukuguqulwa ngempumelelo futhi ithathe ukuvikelwa ngokushesha; I-IGBT isetshenziswe enkampanini ye-infineon, umkhiqizi odume umhlaba wonke.
Kulula ukusebenza nokugcina, i-IGBT MF generator engeniswa kulula ukuyivimba nokuyigcina ngenxa yesakhiwo sayo sesifunda esilula. Inokuvikelwa okuphelele.
Ububanzi besithando somlilo, uhlobo oluhlukile olwenziwe ngezifiso lwe- isithando sokushisa sangaphakathi ngokuya ngamakhasimende kudinga.
I-CNC noma i-PLC ilawulwa ngomshini wokufakelwa kwesicelo sokuqina
Uhlelo lokupholisa amanzi.
I-pneumatic rod feeder.
Ngokwezifiso lonke uhlelo lokushisa oluzenzakalelayo.
Hot UKWAKHA / ukwakha for workpiece enkulu.
Ukuqina kobuso ingxenye enkulu.
Preheating of pipe bending.
Ukunwetshwa kokushisela ipayipi.
Ukuncibilika kwe-aluminium yethusi njalonjalo.
Nciphisa umkhono we-roller.
I-MF-45 imvamisa ejwayelekile yokushisa generator
Ukunikezwa Kwamandla Okushisa Ukushisa
Imvamisa ephakathi ihlinzekela ukushisa okufakwayo